အမြဲလိုလိုသုံးဖြစ်နေတဲ့အီမိုဂျီလေးတွေမှာ ဒီလိုစိတ်ဝင်စားစရာအချက်လေးတွေရှိတယ် – Trend.com.mm
Posted on October 21, 2018 October 19, 2018 by Noel
အမြဲတမ်းလိုလိုသုံးစွဲဖြစ်နေတဲ့အီမိုဂျီလေးတွေမှာ ဒီလိုထူးခြားတဲ့အချက်လေးတွေရှိနေတာ သိရဲ့လား? စာပို့တိုင်း၊ပိုစ့်တစ်ခါတင်တိုင်း အီမိုဂျီလေးတွေက မပါမဖြစ်ပါပဲ။အီမိုဂျီလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဒီလိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်လေးတွေကို အပျင်းပြေဖြစ်စေ၊ဗဟုသုတအနေနဲ့ဖြစ်စေ
*ပထမဆုံးအီမိုဂျီကိုစပြီးဖန်တီးခဲ့သူက ဂျပန်လူမျိုး Shigetaka Kurita ဖြစ်ပါတယ်။၁၉၉၉ ခုနှစ်က Docomo ကုမ္ပဏီအတွက် အီမိုဂျီစတင်ဖန်တီးပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အီမိုဂျီအစ ဂျပန်ကပေါ့။
*တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအီမိုဂျီများနေ့ကို ၂၀၁၄ ၊ဇူလိုင် ၁၇က ပထမဆုံးအကြိမ်စတင်ကျင်းပခဲ့တာပါ။
*၂၀၁၈ ဇွန်လမှာလေ့လာဆန်းစစ်ချက်အရ Unicode Standard list မှာ စုစုပေါင်း တရားဝင်ဖော်ပြထားတဲ့အီမိုဂျီပေါင်း ၂၈၂၃ ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။
*Emoji ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ ဂျပန်လို Picture (e) နဲ့ Character (moji) ကိုပေါင်းစပ်ခေါ်ဆိုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်ဖြစ်နေတဲ့မျက်နှာပုံစံကိုကိုယ်စားပြုတယ်ပေါ့။
*၂၀၁၇ တုန်းက တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာအရ လေ့လာကြည့်တော့ Messenger ကနေ တစ်နေ့ကို ပျမ်းမျှ အီမိုဂျီ ၅ဘီလီယံတောင် ပို့တယ်လို့တွေ့ရှိလာရပါတယ်။အီမိုဂျီက လူငယ်တွေအများဆုံးသုံးစွဲကြတယ်လို့လည်းတွေ့လာရပါတယ်။
*၂၀၁၇ တုန်းက ကမ္ဘာမှာအသုံးများဆုံး အီမိုဂျီသုံးခုက ဘာလဲဆိုရင် မျက်ရည်ထွက်အောင်ရယ်နေတဲ့အီမိုဂျီရယ်၊အသည်းပုံမျက်လုံးနဲ့အီမိုဂျီရယ်၊နမ်းနေတဲ့မျက်နှာလေးနဲ့အီမိုဂျီ စတဲ့သုံးခုပါတဲ့။မျက်ရည်ထွက်အောင်ရယ်နေတဲ့အီမိုဂျီကတော့ ထိပ်ဆုံးအသုံးများတဲ့အီမိုဂျီပါပဲ။
*Person with folded hands
ဒီအီမိုဂျီကို ကိုယ်တွေက ဘုရားရှိခိုးကန်တော့တဲ့အခါ လက်အုပ်ချီတာဆိုပြီး သုံးတာများကြတယ်။တစ်ခါတစ်လေ ဒါကို high-five အဖြစ်တောင်သုံးကြတယ်။တကယ်တော့ဒီအီမိုဂျီရဲ့ မူရင်းအဓိပ္ပာယ်က တောင်းပန်တဲ့အခါ၊ကျေးဇူးတင်တဲ့အခါ ပြတဲ့ဂျပန်တွေရဲ့ လက်ဟန်အမူအရာကိုရည်ရွယ်ကာဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအီမိုဂျီလေးကိုတော့ ကိုယ်တွေက စိတ်ရှုပ်ထွေးလာတဲ့အခါ၊စိုးရိမ်ပူပန်တဲ့အခါသုံးကြတယ်။တကယ်တော့ ဝေခွဲမရဖြစ်လာတဲ့အခါ ဒီအီမိုဂျီလေးကိုသုံးဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
*Face with cold sweat
ဒီအီမိုဂျီထဲက ရေစက်လေးကိုတော့ အများစုက မျက်ရည်စက်နဲ့မှားတတ်ကြတယ်။စိတ်ညစ်နေတယ်၊စိတ်မကြည်ဘူးဆိုတဲ့အခါတွေမှာလည်းသုံးကြတယ်။ဒီအီမိုဂျီရဲ့ မူရင်းအဓိပ္ပာယ်လေးကတော့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေ၊ကြောက်ရွံ့စိတ်တွေ၊နာကျင်မှုတွေဖြစ်လာတဲ့အခါ ဇောချွေးပြန်လာတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုး
ပါ။မျက်ရည်စက်မဟုတ်ပဲ ချွေးအေးစက်လေးဖြစ်ပါတယ်။စာတွေအများကြီးလုပ်ရတဲ့အခါ၊အလုပ်တွေပင်ပန်းတဲ့အခါ ဒီအီမိုဂျီလေးကိုသုံးပေးသင့်ပါတယ်။
ဒီအီမိုဂျီလေးက တကယ်တော့အိပ်ချင်နေတယ်ဆိုတာပြသတဲ့အီမိုဂျီလေးပါ။ဒါပေမဲ့ကိုယ်တွေက မျက်ရည်စက်လေးထွက်နေတယ်ဆိုပြီး ၀မ်းနည်းတဲ့အီမိုဂျီအဖြစ်သုံးလေ့ရှိကြတယ်။မျက်ရည်စက်မဟုတ်ပါဘူး။တကယ်တော့ အိပ်ချင်နေလို့သားရည်ကျနေတာပါတဲ့။
ဒါကိုတော့ ငြိမ်းချမ်းရေးသင်္ကေတတို့၊၂ခုလိုချင်လို့လက်၂ချောင်းထောင်ပြတာတို့အဖြစ်သုံးကြတယ်။တကယ်တော့ဒီအီမိုဂျီလေးကို ပါတီပွဲတစ်ခုခုကျင်းပဖို့ရှိတဲ့အခါ သူငယ်ချင်းတွေဆီကိုပို့သင့်တာပါတဲ့။
ကဲ အီမိုဂျီတွေမှားယွင်းသုံးစွဲနေမိရင် ပြင်လိုက်တော့နော်
အမွဲတမျးလိုလိုသုံးစှဲဖွဈနတေဲ့အီမိုဂြီလေးတှမှော ဒီလိုထူးခွားတဲ့အခကျြလေးတှရှေိနတော သိရဲ့လား? စာပို့တိုငျး၊ပိုဈ့တဈခါတငျတိုငျး အီမိုဂြီလေးတှကေ မပါမဖွဈပါပဲ။အီမိုဂြီလေးတှနေဲ့ပတျသကျပွီး ဒီလိုစိတျဝငျစားစရာကောငျးတဲ့အခကျြလေးတှကေို အပငျြးပွဖွေဈစေ၊ဗဟုသုတအနနေဲ့ဖွဈစေ
*ပထမဆုံးအီမိုဂြီကိုစပွီးဖနျတီးခဲ့သူက ဂပြနျလူမြိုး Shigetaka Kurita ဖွဈပါတယျ။၁၉၉၉ ခုနှဈက Docomo ကုမ်ပဏီအတှကျ အီမိုဂြီစတငျဖနျတီးပေးခဲ့တာဖွဈပါတယျ။အီမိုဂြီအစ ဂပြနျကပေါ့။
*တဈကမ်ဘာလုံးဆိုငျရာအီမိုဂြီမြားနကေို့ ၂၀၁၄ ၊ဇူလိုငျ ၁ရက ပထမဆုံးအကွိမျစတငျကငျြးပခဲ့တာပါ။
*၂၀၁၈ ဇှနျလမှာလလေ့ာဆနျးစဈခကျြအရ Unicode Standard list မှာ စုစုပေါငျး တရားဝငျဖျောပွထားတဲ့အီမိုဂြီပေါငျး ၂၈၂၃ ရှိတယျလို့သိရပါတယျ။
*Emoji ဆိုတဲ့အဓိပ်ပာယျကတော့ ဂပြနျလို Picture (e) နဲ့ Character (moji) ကိုပေါငျးစပျချေါဆိုထားတာပဲဖွဈပါတယျ။ကိုယျဖွဈနတေဲ့မကျြနှာပုံစံကိုကိုယျစားပွုတယျပေါ့။
*၂၀၁၇ တုနျးက တဈကမ်ဘာလုံးအတိုငျးအတာအရ လလေ့ာကွညျ့တော့ Messenger ကနေ တဈနကေို့ ပမျြးမြှ အီမိုဂြီ ၅ဘီလီယံတောငျ ပို့တယျလို့တှရှေိ့လာရပါတယျ။အီမိုဂြီက လူငယျတှအေမြားဆုံးသုံးစှဲကွတယျလို့လညျးတှလေ့ာရပါတယျ။
*၂၀၁၇ တုနျးက ကမ်ဘာမှာအသုံးမြားဆုံး အီမိုဂြီသုံးခုက ဘာလဲဆိုရငျ မကျြရညျထှကျအောငျရယျနတေဲ့အီမိုဂြီရယျ၊အသညျးပုံမကျြလုံးနဲ့အီမိုဂြီရယျ၊နမျးနတေဲ့မကျြနှာလေးနဲ့အီမိုဂြီ စတဲ့သုံးခုပါတဲ့။မကျြရညျထှကျအောငျရယျနတေဲ့အီမိုဂြီကတော့ ထိပျဆုံးအသုံးမြားတဲ့အီမိုဂြီပါပဲ။
ဒီအီမိုဂြီကို ကိုယျတှကေ ဘုရားရှိခိုးကနျတော့တဲ့အခါ လကျအုပျခြီတာဆိုပွီး သုံးတာမြားကွတယျ။တဈခါတဈလေ ဒါကို high-five အဖွဈတောငျသုံးကွတယျ။တကယျတော့ဒီအီမိုဂြီရဲ့ မူရငျးအဓိပ်ပာယျက တောငျးပနျတဲ့အခါ၊ကြေးဇူးတငျတဲ့အခါ ပွတဲ့ဂပြနျတှရေဲ့ လကျဟနျအမူအရာကိုရညျရှယျကာဖနျတီးခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ဒီအီမိုဂြီလေးကိုတော့ ကိုယျတှကေ စိတျရှုပျထှေးလာတဲ့အခါ၊စိုးရိမျပူပနျတဲ့အခါသုံးကွတယျ။တကယျတော့ ဝခှေဲမရဖွဈလာတဲ့အခါ ဒီအီမိုဂြီလေးကိုသုံးဖို့ရညျရှယျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ဒီအီမိုဂြီထဲက ရစေကျလေးကိုတော့ အမြားစုက မကျြရညျစကျနဲ့မှားတတျကွတယျ။စိတျညဈနတေယျ၊စိတျမကွညျဘူးဆိုတဲ့အခါတှမှောလညျးသုံးကွတယျ။ဒီအီမိုဂြီရဲ့ မူရငျးအဓိပ်ပာယျလေးကတော့ စိတျဖိစီးမှုတှေ၊ကွောကျရှံ့စိတျတှေ၊နာကငျြမှုတှဖွေဈလာတဲ့အခါ ဇောခြှေးပွနျလာတဲ့အဓိပ်ပာယျမြိုး
ပါ။မကျြရညျစကျမဟုတျပဲ ခြှေးအေးစကျလေးဖွဈပါတယျ။စာတှအေမြားကွီးလုပျရတဲ့အခါ၊အလုပျတှပေငျပနျးတဲ့အခါ ဒီအီမိုဂြီလေးကိုသုံးပေးသငျ့ပါတယျ။
ဒီအီမိုဂြီလေးက တကယျတော့အိပျခငျြနတေယျဆိုတာပွသတဲ့အီမိုဂြီလေးပါ။ဒါပမေဲ့ကိုယျတှကေ မကျြရညျစကျလေးထှကျနတေယျဆိုပွီး ဝမျးနညျးတဲ့အီမိုဂြီအဖွဈသုံးလရှေိ့ကွတယျ။မကျြရညျစကျမဟုတျပါဘူး။တကယျတော့ အိပျခငျြနလေို့သားရညျကနြတောပါတဲ့။
ဒါကိုတော့ ငွိမျးခမျြးရေးသင်ျကတေတို့၊၂ခုလိုခငျြလို့လကျ၂ခြောငျးထောငျပွတာတို့အဖွဈသုံးကွတယျ။တကယျတော့ဒီအီမိုဂြီလေးကို ပါတီပှဲတဈခုခုကငျြးပဖို့ရှိတဲ့အခါ သူငယျခငျြးတှဆေီကိုပို့သငျ့တာပါတဲ့။
ကဲ အီမိုဂြီတှမှေားယှငျးသုံးစှဲနမေိရငျ ပွငျလိုကျတော့နျော